HGH Pharmacy ee Bangkok ayaa aqbala lacag bixinta
By HGH Thailand November 29, 2017
Bixinta lacag bixinta ee Bangkok
Horumarka hormoonka kobaca ee shabakadda ee ku yaala Bangkok ayaa aqbalay bixinta lacag caddaan ah,
oo keliya ayaa laga heli karaa Thai Thai, lacag bixinta ayaa la siiyaa waraaqaha ka dib
hubinta iyo kormeerida amarkaaga gaarka ah.
Sidee ayaad uga bixineysaa magaalooyinka iyo gobollada kale ee Thailand?
Bixinta macaamiisha laga bilaabo Phuket, Chiang Mai ama magaalooyin kale iyo
gobollada Tayland waxaa la sameeyey horay.
Ka dib markii aad amar ku bixisay boggayaga internetka iyadoo la isticmaalayo gawaarida dukaamada
ama la taliyaha internetka, waxaanu u diri doonaa faahfaahinta xisaabta bangiga
si aad email ugu bixiso lacag bixinta.
- Magaca bangiga
- Lambarka xisaabta
- Magaca shirkada
Ka dib markii ay xaqiijinayaan bixinta saacadaha 3-12 waxaanu kuu soo diri doonaa alaabtaada
Ka akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan dhalidda (link)
Sideen lacag ugu dari karaa xisaabta farmashiyaha HGH?
Si loo xisaabiyo koontada lacagta, waxaa jira siyaabo 2 ah, aynu ka hadalno mid kasta.
1) Xisaabtanka oo la mariyo ATM
2) Xarun kasta oo wax iibsata ama dukaanka waawayn ee Thai, waxaad ka heli kartaa ATM
Mishiinada kor loo qaado iyo lacagaha loo wareejiyo qof kale, tani waxay noqon kartaa
la adeegsado kaar ama mashiinno lacag ah oo aqbala lacagta
Si tan loo sameeyo, dooro howlgalka ATM
- Ganacsi lacageed
- Ku qor magaca bangiga
- Lambarka xisaabta ka-faa'iideystaha
- Ka dibna ku bixi lacagta ama kaarka
- Ka dib markii la xaqiijiyo, xaqiiji magaca iyo magaca shirkada qofka qaata
- Xaqiijinta amar
Kadib markii uu dhammeeyey lacagta, fadlan xafid rasiidka
Ku wareeji laanta bangiga
Haddii aad si toos ah ugu tagto bangiga, geeddi-socodka oo dhan waa la qaban doonaa
ha qaadan wax ka badan daqiiqado 15, kaliya qori ama daabacaan faahfaahinta
bixinta horay, u wareejinta bangiga, macluumaadka bangiga
Shaqaalaha bangiga ayaa kaa caawin doona inaad ku wareejiso qosolka iyo niyada.
Kuwa haysta akoonka bangiga ee Thailand, habka lacag bixinta waa xitaa
fududeyn, lacag-bixinta waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la isticmaalayo bangiga gacanta ama bangiga
bangiga internetka adiga oo aan gurigaaga ka tegin.
Ku noqo sidii loo heli lahaa HGH ee Thailand? Gaadiidka iyo bixinta lacag bixinta